eParewa || Peace and Prosperity » भविष्यमा हुने घटनाका शुभ र अशुभ लक्षणहरु के के हुन?
भविष्यमा हुने घटनाका शुभ र अशुभ लक्षणहरु के के हुन?
२०७५ फाल्गुण ६ गते सोमबार ०७:०५
ज्योतिष शास्त्रले भविष्यमा हुने घटनामा वर्तमान क्रियाकलाप र घटनाले समेत प्रभाव पार्ने बताउँछ । कतिपय भविष्यमा हुने घटनाका लक्षणहरु अगाडी नै देखिने समेत ज्योतिष शास्त्रको दावी छ । भविष्यमा ठूला घटना हुँदा देखिने संकेत यस्ता छन्...
५. कालो पोषाक कुनै पनि ब्यक्ति कालो पोषाक लगाएर घरबाट बाहिर हिँडेको देख्नु भो भने यो अशुभ मानिन्छ । यसले दुर्घटना वा अप्रिय घटनाको संकेत गर्छ । यदि कतै टाढा जान लाग्नु भएको छ र कालो पोषाक लगाएर घरबाट बाहिर हिँडेको देख्नु भो भने यात्रा स्थगित गर्नुस् । समाचारपत्रमा खबर छ ।
६. चाँवी चाँवीलाई सम्पूर्णताको प्रतिक मानिन्छ । यदी तपाइँको चावी सफा गर्दा पनि पटक पटक फोहोर नै भएको पाउनु हुन्छ भने यो शुभ मानिन्छ । चावीलाई बच्चाको शिरानीको तल राख्दा शुभ हुने मानिन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित मिति २०७५ फाल्गुण ६ गते सोमबार ०७:०५